'Nitya' iholide ekhaya - I-Airbnb
'Nitya' iholide ekhaya
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguPriyanka
Thatha iintsuku ezimbalwa uphumle kwindlela yakho exakekileyo ngelixa usonwabele ubutofotofo basekhaya e-'Nitya'. Ibekwe kumda wendalo e-Igatpuri kwiiyure nje ezi-2 ukusuka eMumbai, sizama ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kangangoko. Izixhobo: igadi enkulu, indawo yokuphumla, imidlalo yangaphakathi efana neTT & carrom, umnakekeli okwisiza, indawo yokupaka efanelekileyo, inkqubo yesandisi-lizwi yamaqela. Imigama: Kalsubai 30 km, Nasik 50 km, Bhandardara 40 km, Trimbakeshwar 60 km
Indlu entsha kraca yeendwendwe enendawo zangaphakathi ezimenyezelayo ezicocekileyo, kunye ne-3500 yeenyawo zesikwere seenyawo zegadi kwindawo yokuphumla kunye nokudlala imidlalo yangaphandle. Iirozi ezintle kunye neentyatyambo zonyaka ngokuqinisekileyo ziya kuzisa olo ncumo kubathandi bendalo abajongene nayo. Yonwabela iingokuhlwa zakho kunye nesidlo sangokuhlwa phantsi kwenkwenkwezi egcwele ubusuku kunye nempepho epholileyo ukuze uhlale unenkampani. I-Aesthetically eyilwe ukukholisa zonke iimvakalelo zakho i-Nitya ikulindele.
Kude nesiphithiphithi semetro ezixineneyo, ukuhlala apha kululonwabo. Vuka uye kwiintaka ezintyilozayo kusasa, wonwabele iingokuhlwa zakho phantsi kwesibhakabhaka esigcwele iinkwenkwezi, ukuhlala apha kufana nokucamngca. Umoya uzaliswe yioksijini evuselela iingqondo ezidiniweyo kwaye uya kufuna ukubuya kwakhona kwaye kwakhona.
Umbuki zindwendwe ngu- Priyanka
Athithi Dev bhav. Sisoloko sifumaneka kwiindwendwe zethu, njengoko sihlala kwipropati edibeneyo. Inkonzo elungileyo sisiqubulo sethu, kwaye sizama ngamandla ukwenza iindwendwe zethu zikhululeke.